Ben J : « Amin’ny alalan’ny Rap gasy no ampitako hafatra hanovana ny toe-tsain’ny tanora » – Blaogin'i Voniary
Tao anatin’ny tarika Da Hopp, miangaly Rap gasy, no nahafantaran’ny besinimaro an’i Ben J na Dadlah BenJ. Mitondra ny anarany manokana ihany koa izy eo amin’io sehatra io. Ankehitriny, izy no filoha mpitarika ny fikambanana EKAH MADAGASIKARA izay manentana amin’ny fiovan-toe-tsaina. Fantaro bebe kokoa ao anatin’ity antsafa ity ary i Ben J.
Voniary : Nanao ahoana ny fahazazanao sy ny fomba nitaizana anao ?
Ben J : Tany amin’ny sekoly Katolika foana aho nianatra hatramin’ny 3ème. Avy eo izay vao nanohy fianarana tamin’ny lisea teknika. Fa tamin’izany efa bedy foana nanao rap. Indraindray aza moa adino mihitsy ny fianarana. Tamin’ny 1991 aho dia efa nirotsaka tao anatin’ny kolotsaina Hip Hop. Nandihy tao amin’ny tarika MCMBoyz aloha tamin’izay, fa tamin’ny 1993 izahay no nanomboka nihira ary nanova anarana ho Da Hopp.
V : Misy idirany ve izany hoe mpitarika fikambanana sady mpanao rap ?
BJ : Izao fotsiny, ny tanora no maro an’isa eto amintsika. Ny tena ankafizin’ny tanora anefa dia ny rap gasy. Noho izany, amin’ny alalan’ny rap no tiako isintonana ny tanora mba handray andraikitra. Amin’ny alalan’ny rap no ampitako hafatra mba hanovana ny toe-tsain’ny Malagasy, indrindra ny tanora. Ny zavamisy eto Madagasikara manko dia izao : very ny kolotsaina sy ny soatoavina manoloana ny fanatontoloana. Io anefa tsy voasakantsika mihitsy. Tokony mandray andraikitra izany ny tsirairay fa tsy miandry fotsiny ho tototry ny zavatra avy any ivelany. Azo atao tsara ny mampivady ny vita gasy sy ny kolotsaina moderina. Ohatra amin’izany ny nataonay tao amin’ny Da Hopp. Noezahinay hatrany ny nampivady ny rap amin’ny mozika nentin-drazana Malagasy. Raha henoinao ny vazon’ny Da Hopp dia matetika misy sodina sy valiha foana. Na amin’ny vazoko manokana koa aza aho mbola manohy an’iny « feeling » iny.
V : Ary ny mikasika ny fikambanana EKAH MADAGASIKARA ?
BJ : Hitondrana ny anjara birikiko amin’ny fitadiavana sy famerenana ireo very no nananganako an’io fikambanana io. Notanisaiko ao anatin’ilay vazo « EKAH » avokoa ireo zavatra very na simba (soatoavina, kolotsaina, tontolo iainana, fahaiza-miaina, fanajana ny zon’olombelona sy ny sisa) ary ireo zavatra mila hovaina (fahantrana, habadoana, kolikoly, fandoroana tanety…) Ny tena tanjonay moa dia ny fiovan’ ny toe-tsaina.
V : Ary ahoana ny hevitrao amin’ilay hoe : jiolahimboto ny mpanao rap ?
BJ : « Stereotype » izany e! Rehefa mponina eny Ambohitrarahaba ve izany dia mpangalatra akoho avokoa ? Ohatra izany koa, ny mpanao rap tsy voatery ho jiolahimboto.
V : Mba zarao aminay ny teny entinao miaina !
BJ : Ity izao ny ahy ny teny tena mba tiako : « Aleoko atao hoe tsy misy fotony, toy izay nanana fototra fa nanary ny azy.»
V : Inona ny zavatra vitanao na niainanao tena mampirehareha anao ?
BJ : Tsy tena hoe ireharehana be ohatran’ny inona moa izany ! Fa hitanao, izaho taloha, bedy foana nanao rap. Dia amin’izao faly aho satria afaka nitaizana fiarahamonina ny rap gasy. Eritrereto ange hoe, niainga avy amin’ny rap no nananganako ny fikambanana EKAH. Noho ny rap no afahako mitarika sy manentana olona toy izao. Izao isika mamboly hazo, mandray anjara amin’ny fampandrosoana maharitra. Rehefa mahatratra ny tanjony ny EKAH dia mirehareha aho amin’izay. Rehefa mirindra ny fiarahamonina dia mirehareha aho amin’izay.
V : Mba lazao hoe izay fanirinao ho an’i Madagasikara !
BJ : Ny iriko dia mba tsy hanary ny fototra isika. Tokony mba hisy tanjona iray iombonana, amin’izay miara-miroso isika. Amin’ny Rap ohatra tsy tokony sarahina hoe « new school » sy « old school » izany fa ny rap efa ela no teo. Dia izao koa, tsy tokony hajanona eo am-bava fotsiny ilay fitiavan-tanindrazana fa mila asa.
« Manova saina dia avy eo manova toetra! tsy misy an-kanavaka fa isika rehetra! alefa alefa …! » Ben J
Ben J Da Hopp, Ben J EKAH, EKAH Madagasikara, fitiavan-tanindrazana, rap gasy, tompon'andraikitra